Masinina indostrialy vita amin'ny volo vita amin'ny indostrialy mora vidy ho an'ireo mpamatsy fermentation sy orinasa | YiZheng
ny Turner fanodinana visy roa dia ampiasaina amin'ny famafazana ny zezika biby, fako maloto, fotaka sivana, fotaka, residue fanafody, mololo, tsofa ary fako biolojika hafa, ary be mpampiasa amin'ny fermentation aerobic.
Inona ilay masinina Turner Composting Turner Machine?
Ny taranaka vaovao an'ny Masinina Turner Composting Turner nanatsara ny fihodinan'ny fihodinan'ny axis roa sosona, noho izany dia misy ny fiovan'ny, fampifangaroana ary ny fitrandrahana oxygenation, ny fanatsarana ny tahan'ny fermentation, ny famotehana haingana, ny fisorohana ny fofon'ny fofona, ny fitehirizana ny fanjifana angovo amin'ny famenoana oksizenina, ary ny fanafohezana ny fotoana fanamasinana. Ny halalin'ity fitaovana ity dia mety hahatratra hatramin'ny 1,7 metatra ary ny faharetan'ny fihodinana mahomby dia mety hahatratra 6-11 metatra.
Fampiharana masinina Turner Composting Turner
(1) Masinina Turner Composting Turner dia be mpampiasa amin'ny fanamasinana sy ny fanalana rano toy ny zezika zezika, ny zezika zezika,
(2) Mety indrindra amin'ny fanamasinana ireo akora biolojika ambany toy ny fotaka sy ny fako ao an-tanàna (noho ny votoatin'ny organika ambany dia tsy maintsy omena ny halalin'ny fermentation hanatsarana ny mari-pana fermentation, amin'izay hampihena ny fotoana fanamasinana).
(3) Mifandraisa ampy eo anelanelan'ny fitaovana sy ny oksizena eny amin'ny rivotra, mba hitondrana ny anjara toerana lehibe amin'ny fanamasinana aerobika.
Fehezo ny hevi-dehibe momba ny fanaovana zezika
1. Fitsipika ny tahan'ny karbaona-azota (C / N). Ny C / N mety amin'ny famotehana ny zavatra biolojika amin'ny zavamiaina bitika ankapobeny dia manodidina ny 25: 1.
2. Fanaraha-maso ny rano. Ny votoatin'ny rano amin'ny zezika amin'ny famokarana tena izy dia mazàna voafehy amin'ny 50% -65%.
3. Fanaraha-maso ny rivotra Ny famatsiana oksizenina dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny zezika. Inoana amin'ny ankapobeny fa ny oksizenina ao amin'ny antontam-bato dia mety amin'ny 8% ~ 18%.
4. Fanaraha-maso ny mari-pana. Ny mari-pana dia singa iray manan-danja amin'ny fiasan'ny zavamiaina bitika. Ny hafanana avo lenta dia matetika eo anelanelan'ny 50-65 ° C.
5. Fanaraha-maso PH. PH dia singa iray lehibe manimba ny fitomboan'ny zavamiaina bitika. Ny PH tsara indrindra dia tokony ho 6-9.
6. Fanaraha-maso maimbo. Amin'izao fotoana izao, zavamiaina bitika bebe kokoa no ampiasaina hanalefahana.
Tombony azo amin'ny milina fanodinam-bidy vita amin'ny visy roa
(1) Ny lalan-drivotra fermentation izay afaka mahatsapa ny fiasan'ny masinina iray miaraka amin'ny lava-pandehanana maro dia azo esorina mitohy na amin'ny andiany.
(2) Fahombiazan'ny fermentation avo lenta, fandidiana maharitra, fihodinana matanjaka sy maharitra, fanamiana.
(3) Azo ampiasaina amin'ny fanamasinana aerobika dia azo ampiasaina miaraka amin'ireo efitrano fametahana masoandro sy shifters.
Fampisehoana horonantsary Screw Composting Turner Double
Safidy maodely fanodinam-bidy vita amin'ny milina fanodinam-bidy
Motor Pump Hydraulika
Halalin'ny halalin'ny rano
Teo aloha: Masinina kodiarana Composting Turner Machine
Manaraka: Tankina fanamafisana mitsangana
Fampidirana Inona avy ireo fitaovana forklift Type Composting? Forklift Type Composting Equipment dia milina efatra-amin'ny-iray miverina miasa izay manangona ny fihodinana, ny fivezivezena, ny fanorotoroana ary ny fifangaroana. Afaka miasa amin'ny rivotra sy ny atrikasa koa izy io. ...
Fampidirana Inona ny masinina vita amin'ny kodiarana? Machine Type Composting Turner Machine dia fitaovana fampivarotana lehibe amin'ny zavamaniry mpamokatra zezika biolojika. Ny turner compost misy kodiarana dia afaka mihodina mandroso, mihemotra ary maimaimpoana, izany rehetra izany dia olona iray no miasa. Ny kodiarana composting misy kodiarana dia miasa eo ambonin'ny kasety ...